Bug 40033: Add Burmese (my) asalocale (08a0ef57) · Commits · The Tor Project / Applications / torbutton · GitLab
Unverified Commit 08a0ef57
authored Apr 07, 2021 by Matthew Finkel
Bug 40033: Add Burmese (my) asalocale
View file @ 08a0ef57
<!ENTITY project.start "&brandShortName; ကို ဖန်တီးသူသည် ">
<!ENTITY project.end "၊ ၎င်းသည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေး နှင့် လွတ်လပ်ခွင့်ကို ခုခံကာကွယ်ရန် လုပ်ဆောင်သော အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။">
<!ENTITY help.start "ကူညီချင်ပါသလား?">
<!ENTITY help.donateLink "လှူဒါန်းမယ်">
<!ENTITY help.or "သို့မဟုတ်">
<!ENTITY help.getInvolvedLink "ပါ၀င်လုပ်ဆောင်မယ်">
<!ENTITY bottomLinks.questions "မေးစရာများရှိဦးမလား?">
<!ENTITY bottomLinks.grow "Tor ကွန်ယက်ကို ကြီးထွားရန်ကူညီပါ!">
<!ENTITY bottomLinks.license "လိုင်စင်အကြောင်း သိကောင်းစရာ">
<!ENTITY tor.TrademarkStatement "&quot;Tor&quot; နှင့် &quot;Onion Logo&quot; (ကြက်သွန်နီအမှတ်တံဆိပ်သင်္ကေတ) သည် Tor Project, Inc. ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။">
<!ENTITY aboutTBUpdate.changelogTitle "Tor ဘရောင်ဇာ ChangeLog (ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်း)">
<!ENTITY aboutTBUpdate.updated "Tor ဘရောင်ဇာကို အပ်ဒိတ်ပြုလုပ်ထားသည်။">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkPrefix "ဤထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ် သတင်းအချက်အလက်များအတွက်">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkLabel "ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ">
<!ENTITY aboutTBUpdate.linkSuffix "။">
<!ENTITY aboutTBUpdate.version "ဗားရှင်း">
<!ENTITY aboutTBUpdate.releaseDate "ဖြန့်ချီသည့်ရက်စွဲ">
<!ENTITY aboutTBUpdate.releaseNotes "ဖြန့်ချီမှတ်ချက်များ">
- Copyright (c) 2019, The Tor Project, Inc.
<!ENTITY aboutTor.title "Tor အကြောင်း">
<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "ပြောင်းလဲမှတ်တမ်း ကြည့်မယ်">
<!ENTITY aboutTor.ready.label "လုံခြုံစွာ သုံးစွဲပါ။">
<!ENTITY aboutTor.ready2.label "သင်သည် အင်တာနက်ကို အလုံခြုံဆုံးစွာ သုံးစွဲဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။">
<!ENTITY aboutTor.failure.label "တစ်ခုခု မှားယွင်းသွားပါသည်!">
<!ENTITY aboutTor.failure2.label "ဤ ဘရောင်ဇာတွင် Tor အလုပ်မလုပ်ပါ။">
<!ENTITY aboutTor.search.label "DuckDuckGo ဖြင့် ရှာဖွေမယ်">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "မေးစရာများ ရှိဦးမလား?">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "ကျွန်ုပ်တို့ Tor ဘရောင်ဇာ လက်စွဲစာအုပ်အား ကြည့်ကြည့်ပါ »">
<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Tor ဘရောင်ဇာ လက်စွဲစာအုပ်">
<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Tor Project သည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ရေးခွင့်များကို တိုးတက်စေရန် အမေရိကန် အကျိုးအမြတ်မယူသော ၅၀၁(ဂ)(၃) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လွတ်လပ်၍ အမည်ဝှက်ကာ အများသုံးနိုင်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်သော နည်းပညာများ အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းနည်းပညာများကို အကန့်အသတ်မရှိစွာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်းနှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာနှင့် ပြည်သူများနားလည်နိုင်စေရန် ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပါသည်။">
<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "ပါဝင်ပါ »">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Tor မှ နောက်ဆုံးသတင်းများကို သင့် စာဝင်ပုံးထဲတန်း ရယူလိုက်ပါ။">
<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Tor News သတင်းများအတွက် အမည် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.freeToUse "Tor သည် သင့်လို သုံးသူများမှ လှူဒါန်းငွေကြောင့် အခမဲ့သုံးနိုင်ပါသည်။">
<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "အခုဘဲ လှူမယ်">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "'Tor' and the 'Onion Logo' are registered trademarks of the Tor Project, Inc.">
<!ENTITY brandShorterName "Tor ဘရောင်ဇာ">
<!ENTITY brandShortName "Tor ဘရောင်ဇာ">
<!ENTITY brandFullName "Tor ဘရောင်ဇာ">
<!ENTITY vendorShortName "Tor စီမံကိန်း ပရောဂျက်">
<!ENTITY trademarkInfo.part1 "&quot;Tor&quot; နှင့် &quot;Onion Logo&quot; (ကြက်သွန်နီအမှတ်တံဆိပ်သင်္ကေတ) သည် Tor Project, Inc. ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။">
remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.). -->
<!ENTITY brandProductName "Tor Browser">
<!ENTITY brandProductName "Tor ဘရောင်ဇာ">
<!ENTITY plugins.installed.find "တင်သွင်းထားသော ထပ်တိုးစနစ်ဆော့ဝဲများကို တင်သုံးရန် နှိပ်ပါ">
<!ENTITY plugins.installed.enable "ထပ်တိုး ဆော့ဝဲများ ဖွင့်မယ်">
<!ENTITY plugins.installed.disable "ထပ်တိုး ဆော့ဝဲများ ပိတ်မယ်">
<!ENTITY plugins.installed.disable.tip "ထပ်တိုးစနစ်ဆော့ဝဲများကို တင်သုံးခြင်းမှ​ ရှောင်ကြဥ်ရန် နှိပ်ပါ">
... ... @@ -2,18 +2,19 @@
# LOCALIZATION NOTE(brandProductName):
vendorShortName=Tor စီမံကိန်း ပရောဂျက်
homePageSingleStartMain=Firefox Start၊ ရှာဖွေရန် ကိရိယာသွင်းထားပြီး လျင်မြင်သော ပင်မစာမျက်နှာ
homePageImport=%S ထံမှ သင့် ပင်မစာမျက်နှာ တင်သွင်းပါ
homePageMigrationPageTitle=ပင်မ စာမျက်နှာ ရွေးချယ်မှု
homePageMigrationDescription=သင်သုံးလိုသော ပင်မစာမျက်နှာကို ရွေးပေးပါ -
# that is used by Firefox) to avoid picking up the -brand-short-name values
# that Mozilla includes in the Firefox language packs.
-brand-shorter-name = Tor Browser
-brand-short-name = Tor Browser
-brand-full-name = Tor Browser
-brand-shorter-name = Tor ဘရောင်ဇာ
-brand-short-name = Tor ဘရောင်ဇာ
-brand-full-name = Tor ဘရောင်ဇာ
-brand-product-name = Tor Browser
-vendor-short-name = Tor Project
trademarkInfo = 'Tor' and the 'Onion Logo' are registered trademarks of the Tor Project, Inc.
-brand-product-name = Tor ဘရောင်ဇာ
-vendor-short-name = Tor စီမံကိန်း ပရောဂျက်
trademarkInfo = 'Tor' နှင့် 'Onion Logo' (ကြက်သွန်နီအမှတ်တံဆိပ်သင်္ကေတ) သည် Tor Project, Inc. ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
onboarding.tour-tor-welcome.description=Tor ဘရောင်ဇာသည် အင်တာနက်သုံးစွဲစဥ် အမြင့်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံမှုအား ပေးပို့ပါသည်။ သင့် အွန်လိုင်းခြေရာလိုက်ခံရခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခံရခြင်း နှင့် ဆင်ဆာခံရခြင်းတို့မှ ယခုကာကွယ်ထားပေးပါသည်။ ဤ လမ်းညွှန်တိုသည် သင့်အားမည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်ပေးသည်ကို ရှင်းပြပါမည်။
onboarding.tour-tor-privacy.title=သင့် အွန်လိုင်းခြေရာလိုက်သူများနှင့် ကလောင်များကို ပယ်ချပါ။
onboarding.tour-tor-privacy.description=Tor ဘရောင်ဇာသည် ကွတ်ကီးများကို သီးခြားစွာထား၍ သင့် ဘရောင်ဇာ ရာဇဝင်အား သင်အသုံးပြုပြီးလျှင် ဖျက်သိမ်းပေးပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများသည် ဘရောင်ဇာအတွင်းရှိ သင့်ပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံမှုကို စောင့်ရှောက်ပေးပါသည်။ "Tor ကွန်ယက်" ကိုနှိပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှ ကွန်ယက်အဆင့်တွင် သင့်ကိုမည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်မှုပေးသည်ကို လေ့လာပါ။
onboarding.tour-tor-privacy.button=Tor ကွန်ယက် သို့သွားမယ်
onboarding.tour-tor-network.title=ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု မရှိသော ကွန်ယက်ပေါ် တက်လိုက်ပါ။
onboarding.tour-tor-network.description=ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ လုပ်အားပေးသူများမှ လည်ပတ်ပေးသော Tor ကွန်ယက်ကို သင်နှင့် Tor ဘရောင်ဇာမှ ချိတ်ပေးပါသည်။ အင်တာနက်ကို လုံခြုံစွာခံစားနိုင်ရန်အတွက် VPN နှင့်မတူဘဲ ပျက်ကွက်မှုမရှိပါ သို့မဟုတ် ဗဟိုချုပ်အရာတစ်ခုအား ယုံကြည်ရန်မလိုပါ။
onboarding.tour-tor-network.description-para2=အသစ် - Tor ကွန်ယက် အပြင်အဆင်များကို ချိန်ညှိချက်များ (​Preferences) ဆိုသည့် ကဏ္ဍတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ (အချင်းချင်းချိတ်ဆက်၍ ချွေတာခြင်းလုပ်စဥ်များ (bridges) တောင်းဆိုနိုင်ခြင်း အပါအဝင်)
onboarding.tour-tor-network.action-button=သင့် Tor ကွန်ယက် အပြင်အဆင်များ ချိန်ညှိပါ
onboarding.tour-tor-circuit-display.description=သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် ဒိုမိန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် သင့်အသွားအလာများကို လက်ဆင့်ကမ်း၍ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ​ Tor လမ်းကြောင်း ၃ ခုပေါ်၌ ကုဒ်ဖြင့်ပြောင်းလဲဝှက်ပါသည်။​ သင်မည်သည့်နေရာမှ ဆက်သွယ်နေသည်ကို မည်သည့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကမျှ မသိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းကြောင်းစဥ်ရှိ "ဤဆိုဒ်အတွက် လမ်းကြောင်းအသစ်" ကို နှိပ်၍ လမ်းကြောင်းအသစ်ကို သင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
onboarding.tour-tor-security.title=သင့် အတွေ့အကြုံကို ရွေးပါ။
onboarding.tour-tor-security.description=ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့် ဘရောင်ဇာလုံခြုံမှုကို ပိုမိုလုံခြုံစေရန် သင့်အား အပိုအပြင်အဆင်များရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေး အပြင်အဆင်များသည် သင့်ကွန်ပျူတာကို တိုက်ခိုက်နိုင်သော အရာများကို ပိတ်ပယ်နိုင်ပါသည်။ အောက်တွင် နှိပ်၍ မည်သို့ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် လေ့လာပါ။
onboarding.tour-tor-security.description-suffix=မှတ်ချက် - NoScript နှင့် HTTPS Everywhere ဆိုသော ထပ်တိုးဆော့ဝဲများသည် ကိရိယာအံထဲတွင် မူလပြင်ဆင်မှုအရ မပါပါ၊ သို့သော််လည်း သင်မှ ကိရိယာအံကို စိတ်ကြိုက်စွာ ပြောင်း၍ ၎င်းတို့ကို ပေါင်းထည့်နိုင်ပါသည်။
onboarding.tour-tor-security-level.button=သင့် လုံခြုံရေးအဆင့်ကို ကြည့်မယ်
onboarding.tour-tor-security-level.next-button=အတွေ့အကြုံ အကြံပေးချက်များသို့ သွားမယ်
onboarding.tour-tor-expect-differences.description=Tor မှ ပံ့ပိုးပေးထားသော ပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေး အင်္ဂါရပ်များကြောင့် သင်အင်တာနက်သုံးစွဲသော အတွေ့အကြုံသည် သာမန်ထက် ကွာခြားနိုင်ပါသည်။ သင့် လုံခြုံရေးအဆင့်ပေါ်မူတည်၍ ဝဘ်ဆိုဒ်အရာများ တင်ပြခြင်းသည် ပိုနှေးနိုင်ပါသည်၊ အချို့အရာများသည် အလုပ်မလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မတင်ပြနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သင်သည် လူဟုတ်မဟုတ်သည်ကို စစ်ဆေးမှုခံရနိုင်ပါသည်။
onboarding.tour-tor-expect-differences.button=မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ ဖတ်မယ်
onboarding.tour-tor-expect-differences.next-button=Onion ဝန်ဆောင်မှုများ သို့သွားမယ်
onboarding.tour-tor-onion-services.description= Onion ဝန်ဆောင်မှုများသည် .onion နှင့် ဆုံးသည့် ဝဘ်ဆိုက်များဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဝန်ဆောင်မှုများသည် ထုတ်ဝေသူများနှင့် သုံးစွဲသူများကို အပိုကာကွယ်မှုများပေးသည့်အပြင် ဆင်ဆာခံရခြင်းတို့ကိုလည်း ဆန့်ကျင်ရန် အကာကွယ်မှုများလည်းပါဝင်ပါသည်။ Onion ဝန်ဆောင်မှုများသည် မည်သူကိုမဆို အမည်မဖေါ်ဘဲ အကြောင်းအရာများ နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ ထုတ်ဝေနိုင်ရန် အခွင့်လမ်းပေးပါသည်။ အောက်တွင် နှိပ်၍ DuckDuckGo onion ဆိုဒ်အားဝင်လေ့လာပါ။
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.title=ဂွတ်ဘိုင် Onion ခလုတ်။
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description=ကျွန်ုပ်တို့မှ သင် Tor အသုံးပြုခြင်း အတွေ့အကြုံကို Tor ဘရောင်ဇာအထဲ၌ အပြည့်အဝ ပေါင်းစည်းထားစေချင်ပါသည်။
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.description-para2=အဲ့ဒါကြောင့် onion ခလုတ်သုံးမည့်အစား သင်သည် သင့် Tor လမ်းကြောင်းကို [i] URL အကွက်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ကိရိယာအံ (toolbar) ခလုတ် သို့မဟုတ် [≡] မီနူး သုံး၍ အထောက်အထားအသစ်ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.button=အထောက်အထားအသစ် မည်သို့ တောင်းဆိုရမည်နည်း
onboarding.tour-tor-toolbar-update-9.0.next-button=Tor ကွန်ယက်ပေါ် သို့သွားပါ
onboarding.tor-circuit-display.one-of-three=၃ ခုမှ ၁ ခု
onboarding.tor-circuit-display.two-of-three=၃ ခုမှ ၂ ခု
onboarding.tor-circuit-display.three-of-three=၃ ခုမှ ၃ ခု
onboarding.tor-circuit-display.intro.title=လမ်းကြောင်းစဥ်များ မည်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း?
onboarding.tor-circuit-display.intro.msg=ဆားကစ်လမ်းကြောင်းများသည် ကျပန်းသတ်မှတ်ထားသော လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ၎င်းလက်ဆင့်ကမ်းမှုများသည် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ Tor အသွားအလာများကို လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရန် ချိန်ညှိထားသည့် ကွန်ပျူတာများဖြစ်ပါသည်။ ဆားကစ်လမ်းကြောင်းများသည် သင့်ကို အင်တာနက်လုံခြုံစွာသုံးစွဲနိုင်စေသည်နှင့် onion ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်စေနိုင်ပါသည်။
onboarding.tor-circuit-display.diagram.msg=ဤပုံသည် ၎င်းဝဘ်ဆိုဒ်အတွက် လမ်းကြောင်းစဥ်ပေးသော လက်ဆင့်ကမ်းမှုတို့ကို ပြသပါသည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်များ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ခြင်းများကို တားမြစ်ရန် ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကို မတူညီသော လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီသာ ရရှိပါသည်။
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.title=သင် လမ်းကြောင်းအသစ် လိုအပ်ပါသလား?
onboarding.tor-circuit-display.new-circuit.msg=သင်ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားနေသော ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍မရလျှင် သင်သည် ဤခလုတ်အားအသုံးပြု၍ ဝဘ်ဆိုဒ်အား လမ်းကြောင်းအသစ်ဖြင့် ပြန်တင်နိုင်ပါသည်။
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "အထောက်အထား အသစ်">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "ကွတ်ကီး ကာကွယ်မှုများ">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Torbutton ကို အစပြုရန် နှိပ်ပါ။">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "ထ">
<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "လ">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor ကွန်ယက် အပြင်အဆင်များ...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "ယ">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Tor ဘရောင်ဇာ အပ်ဒိတ်အတွက် စစ်ပေးပါ...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "အ">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "ကွတ်ကီး အကာအကွယ်များ...">
<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "က">
<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Torbutton ကို အစပြုရန် နှိပ်ပါ">
<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor ဘရောင်ဇာ လုံခြုံရေး အပြင်အဆင်များ">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "ကွတ်ကီး ကာကွယ်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲရန်">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "အကာအကွယ် လုပ်ထားသည်">
... ... @@ -13,8 +17,37 @@
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "လမ်းကြောင်း">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "ကွတ်ကီးကို ကာကွယ်ရန်">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "ကွတ်ကီးကို ဖယ်ထုတ်ရန်">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "ကွတ်ကီးကို ကာကွယ်မထားပါ">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "အားလုံးကို ဖယ်ထုတ်ပါ။ သို့သော် အကာအကွယ် လုပ်ထားသည်">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "ကွတ်ကီးကို မကာကွယ်ထားပါ">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "အားလုံးကို ဖယ်ထုတ်ပါ၊ သို့သော် အကာအကွယ် လုပ်ထားသည်">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "ကွတ်ကီးသစ်များကို ကာကွယ်ရန်">
<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "ကွတ်ကီးသစ်များကို ကာကွယ်ခြင်း မပြုရန်">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "လုံခြုံ‌ရေးအဆင့်">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "သင့် ဘရောင်ဇာကို ဟက်ကာများ (hackers) စီနင်းရန် ပိုမိုခုခံအားနည်းစေသော သင့်ဘရောင်ဇာ၏ အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကို လုံခြုံရေး ပွတ်ရန်ကိရိယာမှ ပိတ်ပယ်နိုင်ပါသည်။">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "ပုံမှန်">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Tor ဘရောင်ဇာ နှင့် ဝဘ်ဆိုဒ် အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို ဖွင့်ထားပါသည်။">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "ပိုမိုလုံခြုံသော">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description " မကြာခဏ အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော ဝဘ်ဆိုဒ်အင်္ဂါရပ်များကို ပိတ်ပယ်ထားပါသည်၊ သို့ဖြစ်၍ အချို့သော ဆိုဒ်၏လုပ်နိုင်စွမ်းများ ဆုံးရှူံးစေသည်။">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "ပိုမိုလုံခြုံသော အပြင်အဆင်တွင် -">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "အလုံခြုံဆုံး">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "တည်ငြိမ်သော ဆိုဒ်များနှင့် အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများအတွက် လိုအပ်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အင်္ဂါရပ်များကိုသာ ခွင့်ပြုသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည် ရုပ်ပုံများ၊ မီဒီယာများ နှင့် ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားများ (scripts) တို့ကို ထိခိုက်စေသည်။">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "အလုံခြုံဆုံး အပြင်ဆင်တွင် -">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "ထပ်မံလေ့လာမယ်">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "အချို့သော စာလုံးစတိုင်များ နှင့် သင်္ချာသင်္ကေတများကို ပိတ်ထားသည်">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "အချို့သော စာလုံးစတိုင်များ၊ အိုင်ကွန်များ၊ သင်္ချာသင်္ကေတများ နှင့် ရုပ်ပုံများတို့ကို ပိတ်ထားသည်">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "အသံ နှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်များ (HTML5 မီဒီယာ) နှင့် WebGL တို့ကို နှိပ်၍စနိုင်သည် (click-to-play)">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_warning "စိတ်ကြိုက် ">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_overview "သင့် လုံခြုံရေးနှင့် အမည်ဝှက်မှုတို့ကို တိုက်ခိုက်စေနိုင်သော အချို့သော ဝဘ်အင်္ဂါရပ်များကို ပိတ်ထားမည်">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_tooltip "လုံခြုံရေးအဆင့် - ပုံမှန်">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_tooltip "လုံခြုံရေးအဆင့် - ပိုမိုလုံခြုံသော">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_tooltip "လုံခြုံရေးအဆင့် - အလုံခြုံဆုံး">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_summary "သင် စိတ်ကြိုက်ရွေးထားသော ဘရောင်ဇာ၏ ချိန်ညှိမှုများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော လုံခြုံရေး အပြင်အဆင်များ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ လုံခြုံရေးနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်များအတွက် မူလလုံခြုံရေးအဆင့်သို့ ရွေးထားရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ အကြံပြုပါသည်။">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_restore_defaults " မူလအတိုင်း ပြန်ထားရန်">
<!ENTITY torbutton.prefs.sec_advanced_security_settings "အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေး အပြင်အဆင်များ...">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor လမ်းကြောင်း">
<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "ဤဆိုဒ်အတွက် လမ်းကြောင်းအသစ်">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Onion ဝန်ဆောင်မှု သုံးသူအတည်ပြုရန် တောင်းဆိုစာ ဖွင့်ပါ">
<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "ဤကီးကုဒ်အား မှတ်ထားပါ">
BUNDLE_LOCALES="ar ca cs da de el es-AR es-ES fa fr ga-IE he hu id is it ja ka ko lt nb-NO mk ms nl pl pt-BR ro ru sv-SE th tr vi zh-CN zh-TW"
BUNDLE_LOCALES="ar ca cs da de el es-AR es-ES fa fr ga-IE he hu id is it ja ka ko lt nb-NO mk ms my nl pl pt-BR ro ru sv-SE th tr vi zh-CN zh-TW"
... ... @@ -66,6 +66,8 @@ torbutton.jar:
% locale torbutton ms %locale/ms/
% locale torbutton my %locale/my/